तबमात्र तपाईंले अस्तित्वको अनन्ततालाई जान्न सक्नुहुनेछ « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७८, बिहीबार ०८:३६
२ मंसिर, काठमाडौं । कुनै व्यक्तिलाई आफ्ना मान्यता र विश्वासहरूको घेराले बनेको आफ्नो मानसिकताबाट बाहिर निस्किन तथा आफ्नो जीवनको आधारभूत पक्षबारे नै पूरै अनभिज्ञ रहेको कुरा स्वीकार गर्नको निम्ति विशाल हिम्मत चाहिन्छ । के तपाईं आफूसँग दुईवटा हातहरू छन् भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ ? वा, तपाईंलाई आफूसँग दुईवटा हातहरू छ भन्ने कुरा थाहा छ ? यदि तपाईंले आफ्नो आँखाले हेर्नुभएन भने पनि तपाईंसँग दुईवटा हातहरू छन् भनेर जान्नुहुन्छ । यो कुरा तपाईंले अनुभवबाट जान्नुभएको छ । तर, जब भगवानको कुरा आउँछ, तपाईंलाई विश्वास गर्न भनिएको छ । कसैले पनि तपाईंलाई देवत्वको खोज गर्न भन्दैनन् !
बुद्धि जीवित रहनको लागि सहायक साधन होस यो तपाईंको जीवनको सीमित पक्ष हो । जीविका अपरिहार्य छ, तर त्यसले पूर्णता दिँदैन । यदि तपाईं जीवनका गहन आयामहरूमा जान चाहनुहुन्छ भने, सर्वप्रथम तपाईंलाई आवश्यक साधनहरू चाहिने हुन्छ । यतिखेर तपाईं आफ्ना इन्द्रियहरूको माध्यमले मात्रै जीवनलाई अनुभव गरिरहनुभएको छ— देखेर, सुनेर, छोएर, चाखेर अनि सुँघेर । यी इन्द्रियहरूको सहायताले तपाईं भौतिक पक्षभन्दा पर केही पनि जान्न सक्नुहुन्न । तपाईं एक फुट लामो स्केलले समुद्रको गहिराइ नाप्न सक्नुहुन्न । अधिकांश मानिसहरू यस्तै प्रयास गरिरहेका छन् । आवश्यक साधनहरूबिनै मानिसहरू आफ्नो जीवनको गहन र गूढ आयामहरू जान्न चाहिरहेका छन् ।
मानिसहरू निष्कर्षमा पुग्न हतार गरिरहेका हुन्छन्, किनभने उनीहरूले मूलभूत रूपमा केही पनि अनुभव गरेका हुँदैनन् । तपाईंले जसलाई ूमू भन्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति वा व्यक्तित्व भनेको जीवनबारे रहेका तपाईंका निष्कर्षहरूको डङ्गुर मात्र हो । तर, तपाईं चाहे जस्तोसुकै निष्कर्षमा पुग्नुहोस्, त्यो गलत हुने निश्चित छ, किनभने जीवन तपाईंका निष्कर्षहरूको दायराभित्र रहेको हुँदैन ।
( सदगुरुको प्रवचनमा आधारित )